တရုတ်သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ Decheng
Gypsum Stucco ပြုလုပ်ခြင်းလိုင်း
Gypsum Board ပြုလုပ်ခြင်းလိုင်း
Gypsum Block စက်
ခေတ်မီ Prefab သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး Prefabricated Warehouse / Workshop / Aircraft Hangar / Office Construction ပစ္စည်း
သံမဏိတိုင်များ၊ သံမဏိထုပ်၊ Bracing၊ Purlin တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး သည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြုလုပ်သောဆောက်လုပ်ရေးသံမဏိကိုယ်ထည်များနှင့်စီမံကိန်းနေရာသို့သယ်ဆောင်ခြင်း၊ လျင်မြန်စွာတပ်ဆင်ခြင်း၊ အစိမ်းရောင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လူအင်အားကိုသက်သာစေသည်။
ခေတ်မီ Prefab သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး Prefabricated Warehouse / အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
/ လေယာဉ် Hangar / ရုံးဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း
၁။ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်ရိုးရာအဆောက်အအုံများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
။ ရိုးရာအဆောက်အ ဦး:
A. အချိန်ကုန်: ကြာမြင့်စွာဆောက်လုပ်ရေးကာလ
ဂ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမဟုတ်သောကာကွယ်မှု - ပြန်လည်အသုံးမပြုနိုင်သော၊ အကုန်အကျများသော
A. အချိန်ချွေတာခြင်း: Online မှာထားပြီးရက် ၃၀ အတွင်းအပြီးသတ်ပါ
ခ။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုလွယ်ကူခြင်း - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းအမျိုးအစား
C. ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကာကွယ်ခြင်း - ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ကို ၅၀% လျှော့ချနိုင်သည်။
ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်: သံမဏိသည်မြင့်မားသောစွမ်းအားနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ရိုးရာကွန်ကရစ်အဆောက်အ ဦး များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းသည်မြင့်မားသောစွမ်းအား၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ တင်းကျပ်သောဘောင်အားလုံး၏တင်းကျပ်မှုနှင့်ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်သည်အုတ် - ကွန်ကရစ်အဆောက်အ ဦး ၏ ၅ ပုံ ၁ ပုံသာရှိသည်။ ဒုတိယအကြိမ်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းမီတာ ၇၀ ကိုခုခံတွန်းလှန်ပါ၊ ထို့ကြောင့်အသက်နှင့်စည်းစိမ်များကိုထိရောက်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်မည်
ငလျင်စွမ်းဆောင်ရည်: သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး အလုပ်ရုံများသည်ငလျင်တွင်ကောင်းမွန်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အအုံအများစုသည်ခေါင်မိုးများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အမိုးတည်ဆောက်မှုသည်အခြေခံအားဖြင့်အအေးခံသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတြိဂံခေါင်မိုးဒိုင်းခွေစနစ်ကိုအခြေခံသည်။ သံမဏိပြားများနှင့်အရောင်သုံးသောသံမဏိပြားများကိုတံဆိပ်ခတ်ပြီးသောအခါ၎င်းအစိတ်အပိုင်းများသည်အလွန်အားကောင်းသောငလျင်ခံနိုင်စွမ်းရှိသော“ ပြားနံရံဖွဲ့စည်းပုံစနစ်” ကိုဖွဲ့စည်းသည်။ ၎င်းကို ၈ ဒီဂရီအထက်ငလျင်ပြင်းထန်သောဒေသများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်
ကြာရှည်ခံမှု: သံမဏိကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအားလုံးသည်အအေးပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပါးလွှာသောသံမဏိအစိတ်အပိုင်းစနစ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုအသုံးပြုသည်။ သံမဏိဘားသည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသံမဏိပြားများ၏သံချေးများကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည့်စုပ်ယူမှုနှုန်းမြင့်မားသောစွမ်းအင်နှင့်အပူပေးသောသွပ်လှည့်ဖြင့်ပြုလုပ်သောစာရွက်ထုတ်လုပ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အသုံးချမှုနှင့်အလင်းသံမဏိအစိတ်အပိုင်းများ၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း။ အဓိကတည်ဆောက်ပုံ၏သက်တမ်းသည်အနှစ် ၅၀ ကျော်အထိရှိသည်။
အကျယ်ကြီး: သံမဏိကိုယ်ထည်ကိုဒီဇိုင်း ပြုလုပ်၍ ကြီးမားသော span ပုံစံနှင့်သင့်တော်လျှင် space ကိုထိထိရောက်ရောက်သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
စီးပွားရေး: သံမဏိကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်း၏အလေးချိန်သည်အလွန်ပေါ့ပါးသောကြောင့်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သည်ယေဘုယျကွန်ကရစ်တည်ဆောက်ပုံ၏သုံးပုံတစ်ပုံမျှသာရှိပြီးလုပ်ငန်း၏အမြတ်သည်အထွေထွေတည်ဆောက်ပုံ၏သုံးပုံတစ်ပုံဖြစ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ချက် - ကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းပုံ - 800-1500 RMB / စတုရန်းမီတာ; သံမဏိကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ - ၂၆၀-၅၀၀ RMB / စတုရန်းမီတာ။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်မတူညီ။ ကြီးမားသောပင်လယ်အော်ပုံစံဒီဇိုင်း၊ မိုးလုံလေလုံအာကာသကိုအမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုမတူညီသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးကြီးမားသောဒီဇိုင်းနေရာကိုယူဆောင်လာနိုင်သည်။
အပူလျှပ်ကာ: sandwich panel သည်သံမဏိကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဓိကလျှပ်ကာနှင့်အသံကာကွယ်မှုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ နံရံများတွင်အရောင်များသောသံမဏိအသားညှပ်ပေါင်မုန့်နှင့်ကျောက်ဂွမ်းအသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပါဝင်သည်။ partition ကိုနံရံနှင့်အတူ insulator တွင်လည်း panel ကပိုကောင်းတဲ့ insulator တွင်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိ။ ၁၀၀ မီလီမီတာအထူရှိသော R15 လတ်ဆတ်သောဝါဂွမ်း၏အပူခံနိုင်ရည်သည် ၁ မီတာအထူရှိ M24 အုတ်နံရံနှင့်တူနိုင်သည်။
အပူလျှပ်ကာ: အပူလျှပ်ကာအကျိုးသက်ရောက်မှုအိမ်ရာအကဲဖြတ်များအတွက်အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလင်းရောင်သံမဏိစနစ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောပြတင်းပေါက်များကအမှောင်ကျသည့်ဖန်ခွက်ကိုအသုံးပြုသည်။ အပူကိုကာကွယ်နိုင်သည် 40 db အထိရှိသည်။ အလင်းသံမဏိမူဘောင်နှင့်အရောင်သံမဏိပြားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်နံရံသည်အပူကို ၆၀ dB အထိမြင့်မားစေသည်။ ၎င်းသည်ကွန်ကရစ်သုံးပုံနှစ်ပုံနှင့်သစ်သားတည်ဆောက်မှုထက်နှစ်ဆပိုများသည်။
သက်တောင့်သက်သာ: အလင်းသံမဏိနံရံတွင်စွမ်းအင်ချွေတာသောစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်စံထက်ကျော်လွန်သော formaldehyde ကိုစိတ်ပူစရာမလိုပေ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမှုကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်အထက်တွင်ရှိသောလေကိုသတ်မှတ်ထားသောလေထုတစ်ခုဖြစ်စေပြီးအပြင်ဘက်ရှိခေါင်မိုး၏လေဝင်လေထွက်နှင့်အပူဖြန့်ဖြူးမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြစ်စေသည်။
ထိရောက်မှု ပတ် ၀ န်းကျင်ရာသီဥတုကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိသောရေနှင့်လျှပ်စစ်မီးတို့ကြောင့်ခြောက်သွေ့သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအားလုံး။ အဆောက်အ ဦး အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်ရှိစတုရန်းမီတာ ၁၀၀၀၊ အလုပ်သမား ၅ ဦး အနေဖြင့်၊ ရက် ၃၀ အတွင်းမြေပြင်မှအလှဆင်ခြင်းအထိလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုပြီးမြောက်နိုင်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ပစ္စည်းများ ၁၀၀% ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ စင်ကြယ်ခြင်းမရှိဘဲအစစ်အမှန်အစိမ်းရောင်ရှိသည်။
စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း - အားလုံးသည်စွမ်းအင်ချွေတာရေးစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ အလွှာနှင့်နံရံများကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ အသံကာကွယ်ခြင်းနှင့်အပူကာကွယ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ ၅၀% စွမ်းအင်ချွေတာသည့်စံချိန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သည်။
Panel ကို၏ 4. ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်း
နောက်တစ်ခု: Gypsum အမှုန့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
စက္ကူမျက်နှာပြင် Gypsum ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်လိုင်း
Gypsum Plasterboard ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း